Ibutamoren Mesylate (MK677) Mpanamboatra vovoka - Phcoker
Vovoka Ibutamoren Mesylate (MK677), fantatra koa amin'ny hoe MK677, MK-677, MK-0667, ary L-163,191, …… ..
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) vovoka (159752-10-0) video
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) vovoka dia zava-mahadomelina izay mihetsiketsika mafy orinasa marefo, mikirakira ny fihetsika GH fampandrosoana hhrone hhrone ghrelin. Naseho ny fampitomboana ny famoahana, ary miteraka fitomboana tsy mitsaha-mitombo amin'ny hormones maromaro, anisan'izany ny hormone mitombo sy ny IGF-1, saingy tsy misy fiantraikany amin'ny cortisol. Amin'izao fotoana izao dia mihatsara ny fitsaboana azy amin'ny fitsaboana kely amin'ny hormones, toy ny tsy fahampian'ny hormone zaza tsy ampy taona na olon-dehibe zokiolona, ​​ary ny fanadihadiana nataon'olombelona dia mampiseho fa hampitombo ny haavon'ny hafanana sy ny taolam-bozaka, ary mahatonga azy io ho fitsaboana tsara ho an'ny ny fitsaboana ny fahalemena amin'ny zokiolona. Ny moka-677 dia manatsara ny fatran'ny fatotra ary mety hisy fampiharana amin'ny fitsaboana ny matavy.
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) vovoka (159752-10-0) Specifications
Product Name Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) vovoka
Anarana simika MK-677;2-Amino-N-[(1R)-2-[1,2-dihydro-1-(methylsulfonyl)spiro[3H-indole-3,4′-piperidin]-1′-yl]-2-oxo-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl]-2-methylpropanamide methanesulfonate;
Drug Class MK677 vovoka
molekiolan'ny Formula C27H36N4O5S.CH4O3S
molekiolan'ny Wvalo 624.768 g / mol
Melting Point 161 mankany 315 ° C
vayma- Point 868.9 ° c amin'ny 760 mmhg
Solubility H2O: soluble5mg / mL, mazava
Ibutamoren Mesylate Application Antony famoahana hormonina fitomboana; manova ny metabolisman'ny tavy amin'ny vatana; mampitombo ny habetsahan'ny hozatra sy ny hakitroky ny taolana; manova ny metabolisman'ny tavy amin'ny vatana
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) vovoka (159752-10-0) Description
Ibutamoren mesylate (fantatra koa amin'ny hoe ibutamoren na MK677), dia manandratra ny sekreteran'ny hormone mitombo (GH) ary mampitombo ny tahan'ny fitombon'ny tosidra 1 (IGF-1).
Mampitombo ny haavo ateraky ny hormone ny habaka Ibutamoren amin'ny alàlan'ny fanamarihana ny fihetsika ghrelin hormonina ary mifamatotra amin'ny iray amin'ireo mpitsabo ghrelin (GHSR) ao amin'ny atidoha. Ny GHSR ampiasaina dia manentana ny fivoahana hormonina amin'ny atidoha.
Ny GHSR dia hita any amin'ny faritra ao amin'ny atidoha izay mifehy ny fiankinan-doha, ny fahafinaretana, ny fihetseham-po, ny rhythms biolojika, ny fahatsiarovana ary ny fahalalana. Noho izany, azontsika antenaina fa mety hisy fiantraikany eo amin'ny asa ireo ibutamoren mesylate. Na izany aza, hatramin'izao, ny fikarohana momba ny fitsaboana dia mamaritra fa ny vokatra ibutamoren mesylate dia tsy mihinana - ary araka ny efa nampoizina, tahaka ny ghrelin, ibutamoren mesylate dia mampitombo izany.
Ny zavatra tsara momba ny ibutamoren mesylate dia ny fampitomboana ny haavon'ny hormone mitombo miaraka amin'ny fiakarana kely na tsy misy hormonina hafa, toy ny kortisol. Cortisol dia manakana ny hery fiarovan'ny vatana, mampihena ny fanasitranana ny ratra, ary manimba ny fianarana sy ny fitadidiana, ary matetika dia tsy tsara ny fanandratana io hormonina io.
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) vovoka (159752-10-0) Mechanisman'ny Asa
Ibutamoren mesylate (fantatra ihany koa amin'ny hoe ibutamoren na MK-677), dia mampirisika ny sekreteran'ny hormone mitombo (GH) ary mampitombo ny tahan'ny fitombon'ny tosidra 1 (IGF-1).
Ny tombony amin'ny vovobon-kobaka (677-159752-10) Rohahy Ibutamoren Mesylate (MK0)
MK677 Mety hanampy amin'ny dityity taolana
♦ Mety hanampy amin'ny fampitomboana ny fitomboan'ny hozatra ny MK677
♦ Mety hanampy ny MK677 hampihena ny fako amin'ny hozatra
♦ Mety hanampy amin'ny torimaso i MK677
♦ MK 677 Mety hampihena ny vokatry ny fahanterana
♦ MK677 Mety hisy vokany Nootropic amin'ny ati-doha
Recommended Rood Ibutamoren Mesylate (MK677) poids (159752-10-0) Dosage
Miorina amin'ny fikarohana, ny 20 amin'ny 30mg dia toa ny dosage faran'izay tsara indrindra. Misy ny tatitra momba ny olona mitaky mihoatra ny 30mg an'ny MK677 isan'andro, saingy tsy nitondra vokatra tsara kokoa izany. Ny zava-dehibe kokoa noho ny dosage dia ny halavan'ny vanim-potoana.
Zava-dehibe loatra ny tokony hakana ny MK677 mandritra ny fotoana maharitra. Ny hormone hormone mitombo dia mila manatsara tsikelikely ao amin'ny vatanao, izay mety haharitra herinandro maromaro alohan'ny hanombohanao ny fiantraikany.
Ny vokatry ny Row Ibutamoren Mesylate (MK677) vovoka (159752-10-0)
Ny MK677 dia tsy namokatra fiantraikany be loatra ho an'ny mpampiasa azy mba hiahiahy, saingy ny voka-ponenana sasany dia mety hisy fiantraikany hafa amin'ny fijerena azy. Ny olona izay mora voan'ny tsimokaretina insuline na izay manana Diabetes dia mety ho atahorana rehefa maka MK677. Ny soritr'aretina mifandraika amin'ireny fepetra ireny dia mety mety hampihorohoro amin'ny fampiasana ny MK677. Raha niresaka momba ny fianarana teo aloha, ireo olon-dehibe izay nanana toe-piainana teo aloha dia mety hampidi-doza ny fony raha mampiasa MK677. Amin'ny olon-tsotra hafa dia toa tsy misy fiantraikany mahatsiravina izay hita fa misy, fa ny fikarohana hafa dia ilaina foana hanome toky ny mpanjifa.
Vovoka Alpha GPC (Choline Alfoscerate) mena (28319-77-9)